Arụrụ redlọ? Lee ihe ise ị ga - eme n’oge iche - LucidPix
Arụrụ redlọ? Lee ihe ise ị ga-eme n’oge iche
Ka ọtụtụ n’ime anyị na-abịa n’otu ọnọdụ ụwa na-eche ihu ugbu a, anyị na-amalite ịnabata na ịchọpụta nhọrọ anyị iji mee ka ahụ dị mma. Na post blog a, anyị na-enye gị ihe ise kachasị amasị gị ịme n'oge iche. Ma ihe ndị a bụ nsogbu gị ma ọ bụ na ọ baghị, ugbu a bụ oge ịpụ na mpaghara nkasi obi gị na onye ma, ikekwe ị ga-ahụ ihe omume ọhụụ! Ọ bụrụ n ’ị maghị akwụkwọ“ Arụrụ n'ụlọ ”a, gee ntị na ya Ebe a.
#1 Gbalịa mee klasị mma
Ebe ọ bụ na gyms na ebe a na-emechi ahụ ike emechiela, ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị a ebidola ịnabata klas nke ọma na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta dị ka Instagram na Facebook. Klas ịkụ ọkpọ a ma ama na-esonye na omume a Rọvụ Rumble, nke dabere na mpaghara ọwụwa anyanwụ na West nke States. Ndị nkuzi na-akwado klas na ndụ Instagram nke onye ọ bụla nwere ike iso! Ha bụ ọkachasị ịkụ ọkpọ na klaasị iri atọ ruo iri anọ na ise, nke na-ekpo ọkụ ma dịkwa jụụ. Agbanyeghị ma ọ bụrụ na ị gụghị klas ndụ, lelee ụfọdụ arụmọrụ Youtube. POPSUGAR Fitness bụ ọmarịcha ọwa mma sitere na vidiyo dịka “30-Oge Mweghachi Yoga na Ntụgharị Uche"Ka"Cardio 20-Minute Dance Cardio & Sculpting Workout"
#2 Mụta nkà esi nri gị
Enweghị oge ka mma iji rụọ ọrụ ahụ esi nri ndị ahụ karịa ugbu a! Wepu akwụkwọ Ntụziaka ahụ na kọbọd kichin gị ma rute ya. Were onwe gi site na ijikota otutu nri ma obu ihe eji esi nri dika nke a esere n'okpuru. May nwere ike chọọ ịnwale ụfọdụ usoro nri ọhụrụ, achịcha vegan banana? Lelee Na Bekee Obere Maka nri vegan ịgbanwe ya.
# 3 Gbalịa ụfọdụ ngwa ọhụrụ
Na-atụgharị na mpịakọta igwefoto gị ma na-echetara gị? Gbalịa ụfọdụ ngwa edezi ọhụụ iji bulie foto gị! LucidPix meputara onyogho 3D nke odighi ngwa ndi ozo puru ime. Ndị ọrụ na-enwe ike mbupụ ihe okike 3D ha dị ka GIFS animated ma ọ bụ vidiyo maka ịkekọrịta na nyiwe mmekọrịta niile, ha nwere ike nweta okike site na ịgbakwunye ihe nzacha, okpokolo agba ma họrọ otu ha chọrọ ka vidiyo ha dị. Anyị niile maara na a ga-enwe ọtụtụ '' Tụfuo ụbọchị Wenezde ', yabụ kedu ihe ị ga-eme gbasara foto gị ma debe ya na 3D? Lelee anyị na Instagram maka mmụọ nsọ mmụọ @ lucidpix3d!
# 4 Debe akwukwo
N'oge ndị a, ọ dị mkpa karị ịchọrọ ịchọrọ onwe gị yana ịnweta ụzọ ị ga - esi hazie mmetụta gị. Site na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke akụkọ mgbasa ozi na akụkọ na COVID-19, ọ nwere ike isi ike ịnyagharịa n'ọnọdụ ndị a. Iji nyere gị aka imeri nke a, nwaa idobe akwụkwọ edemede ka ị mara etu esi ele gị anya. Gaa ụlọ akwụkwọ ochie ma nye iwu a Akwụkwọ nd ị na-ewu ewu site na Amazon ma ọ bụ nwalee Day Otu Journal Ngwa na - enyere aka ịdepụta mmetụta gị kwa ụbọchị.
# 5 TikTok gbaa ya egwu
Nke ikpe azu ma n’etughi ihe, gi na ndi enyi gi, ezin’ulo gi ma obu onye ino n’onwe gi dicha gi (oburu n’agbanyeghi na nke a bu gi!) Ma nwaa ịgba egwu. Pịgharịa gaa na TikTok ịchọta egwu na-esite na ndị mbido ruo n'ọkwa ọkachamara Charli D'Amelio choreography. Otu ọ bụla, ịgba egwu na-enyere aka ịhapụ endorphins, na-enyere ọnọdụ gị aka ma na-emekwa ka ị na-emegharị!
Esi Mepụta Vidiyo Pụrụ Iche TikTok →← Etu esi Ese foto 3D na Facebook